Nisy lahatsoratra nivoaka tamin’ny 25 oktobra 2021 nilaza ny fihaonako tamin’i Marco Randrianisa. Tiako my mampahafantatra fa ny zanany vavy TIAVO RANDRIANISA dia tompon-daka amin’ny taranja taekwondo any Eoropa.
Ary tsapako fa tena afaka mampiakatra avo dia avo ny voninahim-pirenena Malagasy izy. Amin’ny maha Filohan’ny Komity Olympika Malagasy ny tenako, dia noraisiko ho adidy lehibe ny nihaona taminy, in-droa miantoana ny tenako no niezaka ny nandresy lahatra azy ny mba handrafitra ny ekipam-pirenena Malagasy ary hiaraka amin’ny ekipa olympikan’i Madagasikara amin’ny lalaon’ ny Nosy hatao eto Antananarivo ny 2023 sy ny Lalao Olympika PARIS 2024.
Marihana fa mizaka ny zom-pirenena frantsay koa moa izy, ka azony ato tsara ny mifidy hiaraka amin’i Frantsa. Manantena anefa aho fa mba hifidy an’i Madagasikara izy, ary izay fanantenana izay no nanosika ahy mbola nanatona ny fianakaviana Randrianisa ary tsy hitsahatra ny hanao izany hatrany aho. Mazava ho azy fa dia fotoana ihany koa nahafahana mifanankalo hevitra momba ny raharaham-pirenena aminy ankapobeany ny fifankahitana, toy ireo Malagasy rehetra izay mifanakalo hevitra amiko, izay tsy misy fanavahana na ara-poko, na ara-politika, na ara-pinoana.
Tsy dia mahaliana ahy ny politika maloto. Madagascar dia Nosy.
Iray ihany isika rehetra.
Catégories :	Politique, Sport	/ par Fondation Siteny 26 octobre 2021
Siteny Thierry Randrianasolo-Niaiko is one of Madagascar’s most accomplished public figures. The businessman, politician and sports...